ဝေးမွဲဝေးနသေေးတဲ့ အိမျအပွနျလမျး …. – Shinyoon
အိမျတဲ့ … အိမျရဲ့အဝေးကွီးကို ရောကျမှ အိမျရဲ့ဝေါဟာရ အနှဈသာရတှကေို ပိုပွီးသိလာခဲ့ရတယျ .. ဒီအိမျကို ကြောခိုငျးခဲ့တာ မလှမျးလို့မှ မဟုတျတာ ကိုယျ့တာဝနျတှကေိုထမျးရငျးက အဝေးကနေ လှမျးရတဲ့လမျးကို ရှေးခဲ့ရတာပါ … တဈခါတဈလေ သိပျကို တမျးတတယျ လှမျးရငျး ငိုရတယျ …
ဒီနနေဲ့ဆို အိမျဆိုတဲ့ အသိုကျအမွုံလေးကိုကြောခိုငျးလာခဲ့တာ … လေးနှဈတငျးတငျးပွညျ့တဲ့နပေ့ေါ့ တဈခေါကျမှ ပွနျမရောကျဖွဈခဲ့ဘူးလို့ပွောရငျနစေိမျ့လိုကျတာလို့ပွောလိမျ့မယျ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို အမြားကွီးထမျးပိုးပွီးမှ ထှကျလာတဲ့လမျးကို အနာတရတှနေဲ့တော့ ကြှနျမ မပွနျခငျြဘူးလေ …
အခုဆို .. အိမျဆိုတဲ့အရိပျအောကျမှာ ခိုမနရေပမေယျ့ ခိုနတေဲ့လူတှအေတှကျ တဈဖကျတဈလမျးက ကူညီနနေိုငျခဲ့ပွီ ဒီပီတိလေးနဲ့ပဲ ခကျခဲတဲ့နရေ့ကျတှကေို ဖွတျသနျးနထေိုငျခဲ့ရတာပါ … တခြို့ရကျတှမှော ဘာပဲဖွဈဖွဈကှာဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို အတ်တကွီးခငျြနမေိတယျ
ဒါပမေယျ့ မဖွဈသေးဘူးလေ … ကိုယျ့မှာအိပျမကျတှရှေိသေးသလို အနောကျမှာရပျနတေဲ့ ဘဝတှရှေိသေးတယျ ကိုယျခဏလှမျးရတာပါ … ပွီးရငျ ကိုယျဒီအိမျလေးမှာ အနှေးထှေးဆုံးနရေတဲ့ရကျတှကေို အတိုးခပြွီးတော့ ဒီအရိပျကမခှာပဲ တဈသကျလုံးနဖေို့တှေးထားတယျ
ခုခြိနျထိတော့ အဝေးကနလှေမျးရတုနျးပဲ … တဈခုခုဖွဈတိုငျး ပွနျတမျးတရတုနျးပဲ … အိမျပွနျလမျးတှဟောနဲ့ နောကျနှဈ နောကျနှဈနဲ့ ဝေးနတေုနျးပါပဲ …
ဝေးမြဲဝေးနေသေးတဲ့ အိမ်အပြန်လမ်း ….
အိမ်တဲ့ … အိမ်ရဲ့အဝေးကြီးကို ရောက်မှ အိမ်ရဲ့ဝေါဟာရ အနှစ်သာရတွေကို ပိုပြီးသိလာခဲ့ရတယ် .. ဒီအိမ်ကို ကျောခိုင်းခဲ့တာ မလွမ်းလို့မှ မဟုတ်တာ ကိုယ့်တာဝန်တွေကိုထမ်းရင်းက အဝေးကနေ လွမ်းရတဲ့လမ်းကို ရွေးခဲ့ရတာပါ … တစ်ခါတစ်လေ သိပ်ကို တမ်းတတယ် လွမ်းရင်း ငိုရတယ် …
ဒီနေ့နဲ့ဆို အိမ်ဆိုတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးကိုကျောခိုင်းလာခဲ့တာ … လေးနှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ တစ်ခေါက်မှ ပြန်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်နေစိမ့်လိုက်တာလို့ ပြောလိမ့်မယ် မျှော်လင့်ချက်တွေကို အများကြီးထမ်းပိုးပြီးမှ ထွက်လာတဲ့လမ်းကို အနာတရတွေနဲ့တော့ ကျွန်မ မပြန်ချင်ဘူးလေ …
အခုဆို .. အိမ်ဆိုတဲ့အရိပ်အောက်မှာ ခိုမနေရပေမယ့် ခိုနေတဲ့လူတွေအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီနေနိုင်ခဲ့ပြီ ဒီပီတိလေးနဲ့ပဲ ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ရတာပါ … တချို့ရက်တွေမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတ္တကြီးချင်နေမိတယ်
ဒါပေမယ့် မဖြစ်သေးဘူးလေ … ကိုယ့်မှာအိပ်မက်တွေရှိသေးသလို အနောက်မှာရပ်နေတဲ့ ဘ၀တွေရှိသေးတယ် ကိုယ်ခဏလွမ်းရတာပါ … ပြီးရင် ကိုယ်ဒီအိမ်လေးမှာ အနွေးထွေးဆုံးနေရတဲ့ရက်တွေကို အတိုးချပြီးတော့ ဒီအရိပ်ကမခွာပဲ တစ်သက်လုံးနေဖို့တွေးထားတယ်
ခုချိန်ထိတော့ အဝေးကနေလွမ်းရတုန်းပဲ … တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း ပြန်တမ်းတရတုန်းပဲ … အိမ်ပြန်လမ်းတွေဟာနဲ့ နောက်နှစ် နောက်နှစ်နဲ့ ဝေးနေတုန်းပါပဲ …